सम्बन्ध टुट्न लागेको कसरी थाहा पाउने ? साधारण कुराले पनि फरक पार्छ सम्बन्ध - ज्ञानविज्ञान
तपाईंको सम्बन्ध कतातिर गइरहेको छ भन्ने कुरा थाहा हुँदा हुँदै पनि कतिपय अवस्थामा यसको परिणाम थाहा नै हुँदैन । सम्बन्धमा खटपट कसको हुँदैन र ? कहिले झगडा, कहिले माया त सम्बन्धका आवश्यक तत्व नै मानिन्छन् ।
कहिलेकाँहीको खटपटले मानिसको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउँछ भने दैनिक रुपमा हुने झै–झगडाले सम्बन्धको अन्त्य नै गरिदिन्छ ।
त्यसकारण आफ्नो सम्बन्धको अवस्थाको बारेमा जान्नका लागि यहाँ यस्ता तरिकाहरु दिइएका छन् जसले गर्दा तपाईंलाई त्यहि अनुरुपको व्यवहार गर्न सजिलो होस् ।
१. थोरै कुराकानी हुनु
जब तपाईंलाई तपाईंको पार्टनरले अफिसबाट फोन गर्न बन्द गर्छ अथवा घर आइसकेपछि पनि तपाईंको प्रश्नको उत्तर मात्र दिन्छ भने सम्झनुहोस् तपाईंको सम्बन्ध टुट्ने क्रममा छ ।
२. तपाईंको लागि समयको कमी
यदि तपाईंको पार्टनरले तपाईंले धेरै पटक फोन गरिसकेपछि मात्र फोन उठाउने गर्दछ र मेसेजको रिप्लाई पनि ढिलो गर्दछ अथवा केहि बहाना बनाउने गरेको छ भने यसको अर्थ तपाईंको सम्बन्ध अब धेरै दिन छैन भन्नु हो ।
३. उनीप्रति रुची हराउनु
यदि तपाईं आफ्नो पछिल्लो फोटो आफ्नो पार्टनरलाई पठाउनु हुन्न र आफ्नो पार्टनरसँग कुरा गर्न मन लाग्दैन भने यसको बारेमा तपाईंले सोच्न जरुरी छ ।
४. अपरिचित बन्नु
बिस्तारै सम्बन्धमा यति चिसोपन आउँछ कि बिस्तारै तपाईं आफ्नो पार्टनरसँग आफ्ना कुराहरु लुकाउनुहुनेछ र अपरिचितजस्तो व्यवहार गर्नुहुनेछ ।
पार्टनरलाई आफ्नो सबै कुरा नभन्नु र पार्टनरसँग उनको सम्बन्ध भएको मात्र कुरा गर्नुहुन्छ भने सम्झनुहोस् तपाईंहरु अब अपरिचित बनिसक्नुभएको छ र सम्बन्ध चाँडै नै छुट्ने प्रक्रियामा छ ।
वास्तविक सम्बन्ध त्यतिबेला सुरु हुन्छ तब त्यसमा कुनै शंका हुँदैन । यदि सम्बन्ध टुट्दै छ भने यसमा शंका पैदा हुने गर्दछ । जब पार्टनर नजिक हुँदैन तब असुरक्षाको भावना पैदा हुने गर्दछ ।
दम्पतीबीच खटपट भइरहन्छ भने यसो गरौं
दम्पतीबीच संवादको वातावरण हुनुपर्छ । जतिसुकै व्यस्त भएपनि दुबैले आपसी छलफल गर्नुपर्छ ।
घरको कुनै पनि निर्णय एकलौटी ढंगले नगरौं । दुबैको समझदारीमा मात्र निर्णयहरु गरौं ।
शंका र अविश्वासले दम्पतीबीच फाटो ल्याउाछ । त्यसैले पहिले त शंका, उपशंका, अविश्वासको वातावरण बन्न नै नदिने । यदि त्यसो भइहाले पनि, दुबै स्पष्ट हुनुपर्छ । दम्पतीबीच कुनैपनि कुरा लुक्नु हुादैन ।
पारिवारिक दायित्व एकजनाको कााधमा मात्र सुम्पदा पनि त्यसले आपसी असमझदारी बढ्छ । त्यसैले पारिवारिक दायित्व साझेदार गरौं । चाहे घरको आथिर्क कुरामा होस् वा अन्य काममा नै दुबैले सराबरी सहभागिता जनाउनु पर्छ ।
अहिले शोसल नेटवर्क साइटको कारण पनि दम्पतीबीच कलह हुने गरेका छन् । यसले सम्बन्ध विच्छेदको अवस्थामा समेत पुर्‍याउने गरेका छन् । सामाजिक संजालमा धेरै समय व्यतित गर्ने, फेक एकाउन्ट बनाउने जस्ता गतिविधि नगरौ । निजी पारिवारिक तस्विर पनि फेसबुकमा शेयर नगरौं ।
Don't Miss it अफिसमा गरिने यस्ता गल्ती, जसको कारण तपाईंको तौल बढ्छ
Up Next नेपालको भूगोल सम्बन्धी केहि जानकारी प्रश्न उत्तरको साथमा